Coronavirus iyo guryaha | Housing Advice NI
Coronavirus iyo guryaha
Dhibaatada Coronavirus waxay abuuri kartaa dhibaatooyin guri waxayna ka dhigi kartaa dhibaatooyinka jira kuwo dhib badan sidii loo xallin lahaa. Macluumaadkani waa talobixin guud oo ku saabsan sida xuquuqdaada guri iyo ikhtiyaaraadkaaga ay isu beddeleen cudur dartiis.
Hel caawimaad xagga dhibaatooyinka guryaha
Xuquuqda Guriyeynta waa hay'ad samafal ah oo bixisa talo bilaash ah oo lagu caawiyo dadka guryo la'aanta ah iyo guryo xumada. Waxaan kuu sharixi karnaa xuquuqdaada iyo xulashooyinkaaga haddii aad dhibaato guri ku haysato. Waxaan sidoo kale ku bixin karnaa dhexdhexaadin bilaash ah xaaladaha qaar. Kani waa adeeg bilaash ah halkaas oo qof madaxbanaan uu isku dayi doono inuu adiga iyo milkiilahaaga ka gargaaro sidii aad ugu xallin laheed dhibaatada.
Wac 028 9024 5640 oo dooro ikhtiyaarka 4aad inaad la hadasho la-taliye. Waad weydiisan kartaa turjumaan bilaash ah haddii aadan ku qanacsaneyn ku hadalka Ingiriiska. Kaliya noo sheeg luuqadda aad u baahan tahay.
Boggan waxaa ku jira macluumaad ku saabsan
Hoy la’aan iyo raadinta meel aad ku noolaato
Saarida iyo dhibaatooyinka gurigaaga hada
Dhibaatooyinka bixinta kiradaada ama amaahda guryaha
Noocyo kale oo caawimaad ah oo lagula tacaamulo dhibaatada coronavirus
Waa inaad gacmahaaga si joogto ah u dhaqdaa. Dhakhaatiirta adduunka waxay talo ka bixiyaan sidii aad nabad ugu heli lahayd afaf kala duwan. Ka eeg Wakaaladda Caafimaadka Dadweynaha iyo websaytyada NHS wixii macluumaada ee ku saabsan badbaadadaada.
Guri la’aanta iyo helitaanka meel aad joogto
Waxaan ahay guri laawe mana haysto meel aan joogo
Si deg deg ah ula soo xiriir Golaha Guryeynta ee NI(Woqooyiga Ireland) marka ay tahay 03448 920 908. Madaxa Guriyeynta NI waxaa sharci ahaan looga baahan yahay inuu caawiyo dadka bilaa hoyga ah waxaana laga yaabaa inay mas'uul ka noqdaan helitaanka meel aad joogto.
Haddii guddiga guryeynta NI aysan ku caawin karin, la hadal la-taliye. Markaad soo wacdid, noo sheeg luqadda aad ku hadasho waxaan dib kuugu soo wici karnaa turjumaan.
Ma heli karaa guri ku meelgaar ah inta lagu jiro xiisaddan?
Golaha Guriyeynta NI wuxuu lahaan karaa mas'uuliyad sharciyeed si uu kuugu meeleeyo guri ku meelgaar ah haddii aadan haysan meel kale oo aad degi karto.
Golaha Guryaha ee NI wuxuu mudnaanta koowaad siinayaa guryo ku meelgaar ah oo loogu talagalay dadka hurdada daran ama kuwa ku jira hoyga 'laakiin hadda u baahan inay is-karantiimiyaan. Haddii aad hore u haysatid meel aad degto laakiin aan kugu habboonayn, waxaa laga yaabaa inaad halkaas sii joogi karto muddo dheer ilaa inta xiisadda la xakameynayo .
Raadi talo haddii lagaa codsado inaad joogto meel u horseedaysa caafimaadkaaga ama nabadgelyadaada.
Ma u guuri karaa guri cusub inta lagu jiro xiritaanka?
Waa inaad joogtaa gurigaaga hadda illaa ay dowladdu ka joojineyso xannibaadda. Dowladda Boqortooyada Midowday waxay kula talisay dadka inaysan horay usii socon dhaqdhaqaaqyada guryaha waqtigan iyo inay dib u dhigto kuwan haddii ay suurtagal tahay. Haddii aad kireysanaysid gurigaaga hadda, mulkiilahaagu kuma qasbi karo inaad ka baxdid la'aan amar maxkamadeed.
Raadi talo haddii aad u baahan tahay inaad dhaqaaqdo inta lagu jiro xidhitaanka.
Waxaan ubaahanahay dammaanad si aan u guuro laakiin mid maheli karo
Mulkiileyaasha waxaa loo oggol yahay inay weydiistaan kiraystayaasha inay bixiyaan dammaanad qaadis, illaa iyo inta ay ka codsadaan qofkasta oo aan takoorin. Damiin-bixiyuhu wuxuu ka ilaaliyaa milkiilaha khataraha qaarkood, sida kiraystaha oo sababa khasaare ama aan bixin kirada. Haddii aadan haysan dammaanad qaade, kala hadal milkiilaha. Waxaad ka bixin kartaa tixraac milkiilaha hore, waxaad bixin kartaa lacag dhigaal weyn ama waxaad ka bixi kartaa siyaasad caymis dakhli si loo yareeyo khatarta mulkiilaha.
Waa inaadan ka dhaqaaqin guriga ilaa xiritaanku ka dhammaanayo. Mulkiilahaaga hadda jira waa inuu tagaa maxkamadda si uu guriga kaaga saaro isla markaana maxkamaduhu aysan wax ka qabanin ka saarista waqtigan.
Saaridda iyo dhibaatooyinka kale ee gurigaaga hadda jira
Milkiilaha gurigeygu wuxuu ii sheegay in aan ka baxo gurigayga kirada ah
Mulkiilahaaga waa inuu tagaa maxkamada si uu guriga kaaga saaro. Waa sharci darro qof kasta oo aan ka ahayn sarkaal maxkamadda inuu kugu khasbo gurigaaga.
Raadi talo haddii lagaa codsado inaad ka baxdo gurigaaga.
Sharci cusub wuxuu ka dhigan yahay milkiileyaasha guryaha gaarka loo leeyahay waa inay ku siiyaan ogeysiis ugu yaraan 12 usbuuc ah haddii ay rabaan inaad guurto.
Laakiin, haddii mulkiiluhu ku siiyay ogeysiis kahor 5 Meey 2020, waqtiga ogeysiinta wuu ka yaraan karaa.
Marka mudada ogeysiintaadu dhamaato, mulkiiluhu kuma eryi karo haddii aad wali ku jirto guriga. Mulkiilaha gurigu waa inuu aadaa maxkamad arintan maxkamadahana ma lahan dhageysiyada dhageysiga ee daqiiqada.
Raadi talo haddii lagaa codsado inaad ka baxdo gurigaaga kirada ah ama haddii mulkiiluhu kugu qasbo inaad guurto.
Anigu waxaan ahay magangalyo-doon gurigeygu kuma habboona go'doomin
Raadi talo haddii aad ku nooshahay hoy laakiin aadan awoodin inaad si ammaan ah u go'doomiso.
Sideen wax uga qabanayaa dayactirka gurigayga kirada ah inta lagu jiro xiisaddan?
Inta badan milkiileyaasha guryaha, oo ay ku jiraan Hay'ada Guriyeynta NI iyo ururada guriyaynta, waxay la tacaamuli doonaan oo keliya dayactirka deg-degga ah ilaa xiisaddan ay ka dhammaato. Arimaha soo socda waa in loola dhaqmaa sidii wax deg deg ah:
Gaas ama qiiq baxsadka.
Qalabka korantada ee biyaha gaaraaya.
Fiiladaha koronto oo dab leh ama fiiqan
Bullaacadaha guriga oo soo butaaca
Albaabada dibedda ee u baahan in la xafido ama laxiro.
Qaraxa haamaha keydka, dusha sare iyo tuubooyinka.
Dhammaan nalalka ama korantada guriga oo shaqo-joojisay.
Fashalka ama shaqo-joogisga nidaamyada kuleylka iyadoo cimilada daran tahay oo aan wax kale la heli karin,
Dhammaan nalalka meelaha la wadaago oo shaqada joojiyay.
Dowladda wax talo ah kama siinin milkiileyaasha guryaha gaarka loo leeyahay sida ay ula macaamilaan dayactirka, laakiin waxay u badan tahay inay la tacaamuli doonaan arrimaha ugu deg degsan.
Raadi talo haddii gurigaagu u baahan yahay dayactir milkiilahaaguna ma xallin doono dhibaatada.
Ma joojin karaa kiradayda haddii aan rabo inaan ka tago gurigayga kirada ah dhibaatadaas darteed?
Haddii aad kireyste gaar ah tahay oo aad saxeexday heshiis kireysi oo waqti go'an ah, waxaad ku xirmaysaa heshiiskaas illaa uu ka dhammaanayo. Waxaad go'aansan kartaa inaad ka guurto guriga, laakiin milkiilaha ayaa sharci ahaan loo ogol yahay inuu kugu dallaco inaad kireysato ilaa inta heshiiska uu ka dhammaanayo ama uu qof kale ka guurayo oo uu la wareego heshiiska kirada. La hadal mulkiilahaaga haddii aad ku sugan tahay xaaladdan si aad u ogaato inaad heshiis la geli karto.
Raadi talo haddii ay ahayd inaad ka baxdo gurigaaga kirada ah oo weli lagugu soo dalacayo kirada.
Waxaan joojiyey shaqada Coronavirus dartiis mana bixin karo kirada
Haddii aad shaqeyneysay oo canshuur bixin laheyd dakhliga ku soo galay bishii Febraayo 2020, loo-shaqeeyahaagu wuxuu ku siin karaa boqolkiiba 80% mushaarkaaga billaha ah ee caadiga ah iyada oo loo marayo qorshaha dowladda cusub. Kala hadal arrintaas cidda aad u shaqayso ama ururkaaga shaqaalaha.
Lacagaha lagu bixiyo nidaamkaan ma bilaabmi doono illaa Abriil 2020. Inta waqtigaas la joogo, waad dalban kartaa gargaarada.
Waxaa jira qorshe la mid ah dadka iyagu iskood u shaqaysta, laakiin lacagahaasi lama bixin doono illaa Juun 2020. Intaas ka dib, waxaad dalban kartaa waxtarro.
Faa’iidooyin noocee ah ayaan dalban karaa?
Waxaa jira waxtarro kala duwan oo laga yaabo inaad dalbatid. Kuwaani waa
Universal Credit, oo kaa caawin kara qarashka nolosha iyo guryeynta
Lacag celinta Qiimaha, oo kaa caawin kara inaad bixiso siciradaada haddii aad qaadaneyso Universal Credit
Xanuunka Jira ee Sharciyeed, kaas oo kaa caawin kara hadaadan awoodin inaad shaqeysid sababtoo ah waad jiran tahay ama keli kaliye ah
Waxaa jira faa’ iidooyin kale oo aad heli karto haddii aad shaqeynaysay oo aad bixinaysay tabarucaadda caymiska qaranka. Kala hadal Make the Call ama hay'adda talo-bixinta xaafadahaddii aadan hubin waxa gargaarada aad heli karto iyo sida loo codsado kuwan.
Faa'iidooyin noocee ah ayaa iga caawin kara bixinta kirada?
Haddii aad horeba u qaadatid Kaalmada Guryeynta, u sheeg Hay'adda Guryeynta ee NI ogaanshaha in duruufahaagu is beddeleen. Qadarka aad ka hesho kiradaada wuu kordhi karaa.
Haddii aadan hada helin faa'iidooyin kale, codso Universal Credit si lagaaga caawiyo kiradaada. Maheli doontid wax lacag ah ugu yaraan 5 toddobaad, laakiin waad dalban kartaa caawimaad dheeri ah inta aad sugeyso.
Markaad qaadato Dheefta Guriyeynta ama universal crediit ah, waxaad dalban kartaa Lacag Guri Ku-Meel-Gaar ah si lagaaga caawiyo kirada haddii gargaaradaadu aysan dabooli doonin lacagta ay tahay inaad siiso milkiilahaaga.
Raadi talo haddii ay dhibaato kaa haysato bixinta kiradaada.
Caawinaad dheeri ah ooo lagu bixiyo kiradaada
Faa'iidooyinka sida Universal Credit badanaa ma bixiso kiradaada oo buuxa. Inta badan kireystayaasha gaarka loo leeyahay waa inay ku bixiyaan kireeyaha dheeraadka ah dheefaha ugu sareeya.
Bixinta Lacag Guriye ynta Ku-Salaysan (DHP) ayaa kaa caawin kara kharashkan dheeriga ah.
Xaaladaha qaarkood, DHP ayaa bixin doonta dhammaan kiradii aan laga bixin Universal Credit muddo 13 toddobaad ah. Xaaladaha kale, DHP waxay bixin doontaa oo keliya xaddi lacageed oo dheeraad ah oo aad milkiilahaaga siiso.
La-taliyayaashayada ayaa kaa caawin kara sidii aad u dalban lahayd lacagtan dheeriga ah.
Faa'iidooyin noocee ah ayaa iga caawin kara bixinta amaahda guriga?
Haddii aad heleysay macaashka qaarkood 9kii bilood ee la soo dhaafay, waxaad xaq u yeelan kartaa xoogaa caawimaad ah xagga bixinta dulsaarka deyntaada, laakiin ma jiraan wax faa’ iidooyin cusub ah oo lagu caawinayo dadka amaahda guryaha ku leh.
Waad weydiisan kartaa amaahiyaha inaad fasax bixisid. Taas micnaheedu waa inaadan bixin doonin amaahda guryaha dhowr bilood. Wali waa lagugu soo dallaci doonaa dulsaar inta lagu jiro waqtigan, laakiin qiimeyntaada sumcadda looma dhinto maxaa yeelay waad joojisay lacag bixinta. Si loo daboolo lacagaha la seegay, amaahiyahaagu wuxuu kordhin karaa nolosha amaahdaada isla tirada bilaha aad seegtay ama kordhin kartaa lacagta aad ku bixisay lacagtaada billaha ah.
Raadi talo haddii ay dhibaato kaa haysato bixinta amaahda guryaha.
Caawimaad kale oo noocee ah ayaan ka heli karaa dowladda?
Waxaa laga yaabaa inaad awoodo inaad hesho xoogaa caawimaad dheeri ah inta aad sugeyso lacagaha waxtarka.
Waad heli kartaa caawimaad haddii aad
aad leedahay astaamo Coronavirus ah ama waxaa loo sheegay inay gooni u baxaan
Caawimaad u baahan tahay xaalad degdeg ah oo daqligoodu hooseeyo
aad codsatay ama aad horayba u qaadatay Universal Credit
Caawintan waxaad ka dalban kartaa khadka tooska ah,. laakiin foomku wuxuu ku qoran yahay Ingiriis. Waxaad sidoo kale dalban kartaa adigoo wacaya 0800 587 2750. Raadi talo haddii aad u baahan tahay caawimaad si aad u dalbato.
Waxaa jira dad fara badan oo codsanaya deeqahaas iyo amaahda sidaas darteed waxay qaadan kartaa iskudayo badan kahor intaadan qof lahadlin. Sii wad isku dayga inaad ka gudubto.
Noocyo kale oo caawimaad ah si loola tacaalo dhibaatada Coronavirus
Hay'ad samafal ayaa laga yaabaa inay ku caawin karto haddii aad dhib ku qabtid inaad maareyso waqtigan. La hadal la-taliye Xuquuqda Guriyeynta oo laga yaabo inay ku caawiyaan ama kuu sheegaan hay'adaha kale ee ku caawin kara.
Ka caawi cuntada iyo waxyaabaha daruuriga ah
Kaydkaaga cuntada ee deegaankaaga ayaa ku caawin kara haddii aad runtii xaalad xun ku sugan tahay. La xiriir FareShare ama Trussell Trust si aad u ogaato kaydka cuntada ee deegaanka. Waa inaad sidoo kale ka hubisaa kaniisadaha maxalliga ah ama kooxaha samafalka si aad u ogaato haddii wax adeegyo maxalli ah loo sameeyay in lagu caawiyo dadka ka tirsan bulshada.
Cunto iskuul bilaash ah
Waxaad awoodi kartaa inaad hesho lacag dheeraad ah oo kaa caawisa maaraynta haddii carruurtaadu xaq u leeyihiin cunnooyinka dugsiga ee lacag la’aan ah.
Bryson Intercultural waxay ku siin kartaa talo ku saabsan xuquuqdaada iyo wixii caawimaad ah ee aad heli karto haddii aad tahay magangalyo-doon, qaxooti, ama qof codsigiisa magangalyo la diiday.
Caawinta wax ka qabashada dambiyada nacaybka
Adeegga Booliska ee Waqooyiga Ireland iyo Taageerada Dhibanaha NI ayaa kaa caawin kara haddii aad tahay dhibane dembi nacayb ah. Raadi talo haddii aad dareento nabadgelyo darro gurigaaga sababta oo ah in lagu soo weeraray ama laguu hanjabay.